Dhaxalka Bahamian waxaa loogu dabaaldegi doonaa ciyaarta Miami Marlins bisha Juun 12, 2021
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Bahamas » Dhaxalka Bahamian waxaa loogu dabaaldegi doonaa ciyaarta Miami Marlins bisha Juun 12, 2021
Dhaxalka Bahamian loo dabaal degay
Bahamians-ka Florida oo dhan, USA ballaaran, iyo The Bahamas waxaa lagu dhiirigelinayaa inay keenaan durbaankooda iyo calankooda, ciyaar gaar ah oo lagu xuso Bahamian oo ay la socdaan Miami Marlins maalinta Sabtida, Juun 12, 2021, 4:10 pm amaahDepot Park ee Miami , Florida.
Dhaqanka Junkanoo iyo Bahamian Jazz Chisholm ee Marlins ayaa iftiimin doona dhacdada gaarka ah.
Ciyaarta ugu xiisaha badan ayaa maamuusi doonta Major League Miami Marlins Baseball player, Jasrado "Jazz" Chisolm Jr., oo u dhashay Nassau, Bahamas.
Dabaaldeg dib udhac ah oo muujinaya heesaha caanka ah ee Bahamian waxaa sameyn doona kooxda Bahamiyam Band Band Delight.
Ciyaarta baseball-ka oo ay Miami Marlins la qaadan doonaan Atlanta Braves ayaa la filayaa inay u dabaaldegaan hidaha iyo dhaqanka hodanka ah ee The Bahamas oo ay weheliso xiriirka dhow ee ay la leedahay bulshada reer Miami. Dabaaldeggu wuxuu ka muuqan doonaa muusigga garaacaya iyo muusigga ee The Bahamas, iyo pregame Junkanoo ayaa ku degdegay waxqabadka 3da galabnimo oo ay ku jiraan The Bahamas Junkanoo Revue ee Miami iyo halyeeyga Junkanooers Barabbas Woodside, Langston Longley, Ronnie Sands iyo Pluckers Chipman.
Ciyaarta ugu xiisaha badan ayaa maamuusi doonta Major League Miami Marlins Baseball player, 23-sano jir ah Jasrado "Jazz" Chisolm Jr., oo u dhashay Nassau, Bahamas. Jazz waa ciyaartooygii ugu horreeyay ee Bahamian ee leh magaca 'Marlins franchise' iyo kan toddobaad ee Bahamian, oo ciyaara Baseball Major League.
Dabaaldega Heritage waa iskaashi ay sameeyeen Miami Marlins, Xafiiska Bahamas Qunsuliyadda Guud (Miami), Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas, Bahamasair, Maamulka Isboortiga Qaranka (NSA) ee Bahamas iyo Bahamas Baseball Association (BBA).
“Meel loo socdo, Jasiiradaha The Bahamas waxaa adduunka looga yaqaanaa qoraxda, ciidda, badda iyo cayaaraha. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan la shaqeynay hay'ado caan ah oo badan, kuwaas oo ciyaartoydooda, qoysaskooda iyo asxaabtooda ay u yimaadeen inay la kulmaan indho indheyn, quruxda dalkeena iyo soo dhaweynta diiran. Waxaan wali ku xalinay raadkeena si aan u hubino in dhaxalka gaarka ah ee hodanka ah ee The Bahamas, iyada oo loo marayo iskaashatooyinkan, si aad ah loo dallacayo iyo in Bahamas loo yaqaan halka ugu horreysa ee loogu talagalay dalxiiska isboortiga ee Kariibiyaanka. Inaan si guul leh ula shaqeyno ururada sida Miami Marlins waxay naga caawisay si weyn, ”ayay tiri Mrs. Linda Mackey, Qunsulka Guud, Bahamas Qunsuliyada Guud (Miami).
Ra'iisul Wasaaraha, Mudane Hon. Dr. Hubert Minnis oo ay weheliyaan marti sharaf kale oo dawlada ka tirsan ayaa lagu casuumay ururka Marlins si ay uga soo qayb galaan munaasibadan.
Xiriiro xayeysiin gaar ah ayaa loo sameeyay qurbajoogta Bahamian si ay u iibsadaan tikidhada ciyaarta isla markaana ay u helaan funaanad "Bahamian Heritage Chisolm Jr." si loogu xiro ciyaarta. Deeq loogu talagalay BBA iyo marin u helitaanka koox-kooxeedkii hore ee Junkanoo iyo bandhigyadii Bandhigga Farxadda ee postgame ayaa lagu soo daray xirmada xayeysiinta. Tikidhada guud ee ciyaarta ma siinayaan kaqeybgalayaasha inay helaan funaanad gaar ah oo loogu dabaaldego Dhaxalka Bahamian. Xiriiriyaha waa:
Dabaaldega Dhaxalka Bahamian - NSA (fevo.com)
Dabaaldega Dhaxalka Bahamian - BBA (fevo.com)
Bahamasair wuxuu kaloo u sameeyay xirmooyin safar gaar ah oo safar ah oo loogu talagay dadka u safraya Florida ee ka imanaya Nassau iyo Freeport. Tigidhada, adoo adeegsanaya lambarka promo ee 00MXDF1F oo laga iibsaday bahamasair.com, waa $ 270.09 oo ka imanaya Nassau ilaa Miami ama Fort Lauderdale iyo $ 266.17 oo ka socda Freeport ilaa Fort Lauderdale waxaana ku jira tikidhada duulimaadyada ee safarka, tikidhada ciyaarta, Heritage T-Shirt, iyo madaddaalada ciyaarta dambe
Bahamians-ka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay keenaan durbaankooda maqaarka ariga iyo calanka. Buuq sameeyayaasha, oo ay ku jiraan dhawaaqyada iyo aaladaha dabaysha, ayaa si adag looga mamnuucay garoonka.